E mere nzukọ banyere Transportgbọ njem na Finike na Kumluca - RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMediterranean Region07 AntalyaNzukọ A na-ebu Transportgbọ njem na Finike na Kumluca
14 / 02 / 2020 07 Antalya, Mediterranean Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
nzuko banyere njem na finike na ájá
N'ime mmezigharị ọrụ nke Antalya Metropolitan Municipality Transportation Master Plan, o zutere ndị isi na ndị otu obere ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Kumluca na Finike.
N'oge nzukọ a, a tụlere isiokwu banyere mgbanwe, mmeghari ohuru na ntụgharị nke ụgbọala ndị ahụ. Ndị na-ere ahịa na-ebugharị ụgbọ mmiri gosipụtara obi ụtọ ha iji mkpebi dị iche iche mee mkpebi.
N'ime mmezigharị ọrụ nke Antalya Metropolitan Municipality Transportation Master Plan, ọ gara n'ihu na mkparita uka na ndị azụmaahịa njem ọha na mpaghara. N’ọnọdụ a, ndị Fintur na-ekwenye ekwenye, Özkumluca Cooperative na ndị isi oche Hastur na ndị otu bịara nzukọ ahụ emere na Ngalaba Ọrụ Finike.
NSOGBU EGO NA-EKPERE
N'ọmụmụ ihe ahụ, a tụlere ihe aga - eme njem na njem ọha na Finike na Kumluca ma nụ ihe ndị pere mpe. Na Kumluca Mavikent-Beykonak, a na-atụle nkwonkwo nkwonkwo n'ime usoro nke ntụgharị nkwonkwo, agbata mpaghara Kumluca Olympos-Yazır, njem ọha na eze n'etiti Finike Hasyurt na Kumluca, na ntụle na mmeghari ohuru nke ụgbọ njem ọha.
Ndị na-ere ụgbọ njem Finike na Kumluca, ndị bịara nzukọ ahụ, gosipụtara afọ ojuju ha na mkpebi nke otu uche banyere ọdịnihu nke ụgbọ njem ma kwado mkpebi ndị e mere. Obodo Antalya na Mọsko ga-enwe nzukọ na-esote ya na ndị na-ebugharị ndị na-ebugharị ụgbọ njem na Ngalaba Ọrụ Kumluca na ụbọchị na-abịa.
Usoro Ndepụta Ngwaọrụ na Finike Transportation
Elmalı-Finike nkewa Kalkan Road Project Survey na injinia oru di nro
Nzukọ EIA na Antalya-Nevşehir-Kayseri High Speed ​​Train Project…
Meetinged Nzukọ na Antalya-Nevşehir-Kayseri High Speed ​​Train Project dị na Nevşehir…
Ozi dị mkpa banyere njem si Binali Yildirim
Ọhụụ na-awụ akpata oyi n'ahụ na Train Speed ​​Speed ​​na Nzukọ Ọgbakọ nke Sivas!
Faces nke Dağbeli na Bademağacı Zukọta na Udo Ọha Ọha
Onye isi ala Soyer na-akpọsa withgbọ njem Ọha na 2019
Antalya Ụgbọ njem Tradesman
Antalya Ụgbọ njem Master Atụmatụ
Ejiri ahịrị nke Finike
Gbọ njem ndị Finishia
Hasyurt Kumluca ahịrị obere ahịrị
Kumluca mined edoghi
Kumgbọ njem Kumluca